भारतीय नायकसंग नीताको ढुंगाना ,परमिता बनिन् लेडी डन हेर्नुहोस भिडियो सहित.... - Everest Media News
Home भिडियो भारतीय नायकसंग नीताको ढुंगाना ,परमिता बनिन् लेडी डन हेर्नुहोस भिडियो सहित….
भारतीय नायकसंग नीताको ढुंगाना ,परमिता बनिन् लेडी डन हेर्नुहोस भिडियो सहित….
भर्खरै मात्र प्रदिप खड्कासंग रोजमा देखिएकी नायिका परमिता राणाको नयाँ फिल्म दि कर्माको पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ । “बजार लाग्या छ” बोलको सार्वजनिक गीतमा नायिका नीता ढुंगानाले आईटम डान्स प्रस्तुत गरेकीछिन् । गीतमा केही हदसम्म बलिउड शैलीको छनक आउँछ ।
कोशिस क्षेत्रीको संगित र शब्दमा रहेको गीतमा मनिषा पोखरेलको अवाज रहेको छ भने कोरियोग्राफी रामजी लामिछानेको रहेको छ । गीतमा नीतासंगै परमिता र बुद्धि तामाङ लगायतका कलाकारहरु पनि देखिएका छन् । जहाँ परमिताको लेडी डन लुक्स देख्न सकिन्छ । सिंहासनमा बिराजमान परमिताको लुक्स हेर्दा उनी महारानी वा लेडी डन बनेकीछिन् की भन्ने अनुमान लगाउँन सकिन्छ ।
देवकुमार श्रेष्ठले निर्देशन गरेको यस फिल्ममा परमिता निकै फरक भुमिकामा देखिनेछिन् । नेपाल र भारत सिमा क्षेत्रमा हुने विभिन्न घटनामा आधारित यस फिल्ममा भारतका मोडल करण बर्मा मुख्य नायकको भुमिकामा रहेका छन् ।
तराई भेग र सिक्किममा सुटिङ गरिएको ‘दि कर्मा’ का निर्माता जय राज रायको रहेका छन् । निशा खतिवडा समेत निर्माताको रुपमा रहेको यस फिल्मलाई हिन्दी भाषामा पनि डब गरिनेछ भने भारतमा पनि रिलिज गरिनेछ ।
वरूण तथा अनुष्काको ‘सुई धागा’ बन्यो सुपरहिट, यस्तो छ कमाइ पढ्नुहोस पुरा…..
सोनालीपछि ऋषि कपुरलाई थर्ड स्टेजको क्यान्सर…